लकडाउन खुकुलो भएसँगै काठमाडौँ छिर्नेको भीड, नागढुङ्गामा सवारी जाम (भिडियो रिपोर्ट) शुक्रबार काठमाडौँको नागढुङ्गामा हेल्मेट र बर्सादी लगाएका एक युवक प्रहरीलाई अनुरोध गर्दै थिए । मेरो सानो बच्चा प…. – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/लकडाउन खुकुलो भएसँगै काठमाडौँ छिर्नेको भीड, नागढुङ्गामा सवारी जाम (भिडियो रिपोर्ट) शुक्रबार काठमाडौँको नागढुङ्गामा हेल्मेट र बर्सादी लगाएका एक युवक प्रहरीलाई अनुरोध गर्दै थिए । मेरो सानो बच्चा प….
क्रबार काठमाडौँको नागढुङ्गामा हेल्मेट र बर्सादी लगाएका एक युवक प्रहरीलाई अनुरोध गर्दै थिए । मेरो सानो बच्चा पनि छ हजुर । बुटवलबाट आएको, फेरि फर्केर उता जाने अवस्था छैन । यो पासबाट जाने व्यवस्था गरिदिनुप-यो । उनको हातमा नगरपालिकाको वडा कार्यालयले बनाइदिएको पास थियो जसलाई सरकारले मान्यता दिएको छैन । प्रहरीले उनलाई बुटवलबाट नागढुङ्गा आउञ्जेल सडकमा ठाउँ–ठाउँमा प्रहरीले पास जाँच गरेन भनेर सोधे उनले कहिपनि जाँच नगरेको बताए ।